News | Divorce
News | Tag: Divorce
दुनियाँलाई आश्चर्यमा पारेका बलिउडका ६ महंगा ‘डिभोर्स’
एजेन्सी । बलिउडमा केही यस्ता जोडीहरु छन् जसको डिभोर्सले नै दर्शकहरुलाई आश्चर्यमा पारेको थियो ।
डिभोर्स हुने प्रमुख कारणहरु
एजेन्सी । सबै श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्ध एकनासको हुन सक्दैन । विभिन्न कारणले डिभोर्स हुने गर्दछ ।
यस्ता कुरा ख्याल गर्नुृहोस्, नत्र डिभोर्स होला !
एजेन्सी । सबै श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्ध एकनासको हुन सक्दैन । विभिन्न कारणले डिभोर्स हुने गर्दछ । केही यस्ता सामान्य कारण पनि हुन्छन् जसका कारण श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्ध एकाएक बिग्रिएर जाने गर्छ ।
नयाँ संहितापछि सम्बन्धविच्छेदका घटना बढ्दै
दुल्लु । नयाँ मुलुकी संहिता जारी भएसँगै दैलेख जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ताको चाप बढेको छ । गत आर्थिक वर्षको जिम्मेवारी सरेका ५२ मुद्दा र चालू आवको आठ महीनामा दर्ता भएका गरी २८५ मुद्दा छिन्न बाँकी भएको उक्त अदालतका सूचना अधिकारी विनोद आचार्यले जानकारी दिए ।
थाहा पाउनुहोस् डिभोर्स हुने प्रमुख कारणहरु के के हुनसक्छन्
एजेन्सी । सबै श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्ध एकनासको हुन सक्दैन ।
श्रीमतीलाई डिभोर्स दिदाँ अर्बौको सम्पत्ति गुमाएका श्रीमानहरु
कसैले दिए ४०० करोड त कसैले दिए आधा सम्पत्ति–यी हुन् बलिउडका महँगा डिभोर्सहरु !
बलिउड स्टारहरुको लवस्टोरीको बारेमा धेरै नै रिपोर्टहरु मिडियामा आउने गर्छन् । त्यो भन्दा पनि बढी उनीहरुको डिभोर्सको चर्चा गर्छन् । लव अफयेर, विवाह र डिभोर्सका कारण चर्चामा आउने बलिउड स्टारहरुको चर्चा पछिल्लो समय केही ज्यादा नै हुने गरेको छ ।
सम्बन्ध विच्छेदमा पुरुषको मुद्दा अधिक
हेटौँडा । चालू आवको पछिल्लो पाँच महीनामा ७५ पुरुषले सम्बन्ध विच्छेदका लागि जिल्ला अदालत मकवानपुरमा मुद्दा दायर गरेका छन ।